स्वास्थ्यकर्मीको संसार रुवाउने व्यथा : गर्भवती विदा नपाउँदा दुई जुम्ल्याहा सन्तान गुमाए – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/स्वास्थ्यकर्मीको संसार रुवाउने व्यथा : गर्भवती विदा नपाउँदा दुई जुम्ल्याहा सन्तान गुमाए
यो आरोप लगाइएको छ कि ति कर्मचारीले १५ दिन अघि बिदाका लागि आवेदन दिएका थिए तर उनलाई बिदा दिइएन । विश्वविद्यालय प्रशासनमाथि संवेदनहीनताको आरोप लगाउँदै उनका साथीहरूले राति कुलपति निवास घेरा हालेका थिए । यस सम्बन्धमा कुलपतिसँग कुरा गर्ने प्रयास गरियो तर उनीसँग सम्पर्क हुन नसकेको हिन्दी अखबार अमरउजालले जानकारी दिएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण, जिल्ला प्रशासन देहरादुनले कृषि र प्रविधि विश्वविद्यालयको जीबी पन्तका छात्रावासहरू अधिग्रहण गरी क्वारेन्टाइन केन्द्रको निर्माण गरेको छ । विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि यहाँ काममा लगाइएको छ। करीव दुई महिना अघि प्राचार्य सहायक अनुराग शर्माको ड्युटी सीबीएसएच कलेजमा लगाइएको थियो ।
निर्देशकले भने,‘यो औषधि शरीरमा रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउनमा धेरै फाइदाजनक छ । धेरै गम्भीर रोगहरू पनि यसबाट निको हुन्छन् ।’ आईआईटीबीपीका डीआईजीले होमोप्याथिक विभागको तर्फबाट निःशुल्क औषधि वितरण कार्यको सराहना गरेका छन् । कमाडन्ट प्रेम लाल, सीएमओ एनएस धर्म शक्ति, पीआरओ राजीव नेगी, जिल्ला होमोप्याथिक अधिकारी डा. जेएल फिर्मल, डा. शैलेन्द्र पाण्डे, डा. विनोद शर्मा, भाजपा किसान मोर्चा उपाध्यक्ष जोगिन्दर सिंह पुंडीर आदि उपस्थित थिए । यो समाचार अमरउजालाबाट लिइएको हो । अहिलेको समयमा सान्दिर्भक लागेर हामीले भानुवाद गरेका हौँ । हरेक देशका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले अहिले एउटै खालको समस्या भोग्नु परेको छ । नेपालमा पनि यस खालका केही प्रतिनिधि घटनाहरु भएका छन् । हामीले मानवतालाई पहिलो स्थानमा राखेर हेर्नुपर्छ ।
महिलाको बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेर कति हो ?-जानकारीको लागि सबैलाई शेयर गर्नुहोस